အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ မြင်သူတိုင်း သဘောကျစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မိုးပွင်ဖြူ ရဲ့ ဗီဒီယို…. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ မြင်သူတိုင်း သဘောကျစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မိုးပွင်ဖြူ ရဲ့ ဗီဒီယို….
အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ မြင်သူတိုင်း သဘောကျစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မိုးပွင်ဖြူ ရဲ့ ဗီဒီယို….
လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နာမည်ကြီးနေသူလေး မိုးပွင့်ဖြူ ကတော့ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို တက်သစ်စ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးပွင့်ဖြူလေးက အရမ်းစားပုံတွေ အမြဲတမ်း တင်ပေးနေတာကြောင်း့ ပုရိသတွေကြားမှာတော့ အရမ်းကို ရေပန်းစားနေ တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကျစ်လျစ်သွယ် လျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေကို အသားပေးထားတဲ့ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပြင်း တဲ့ ပုံရိပ်တွေက လည်း ပုရိသတွေ ကို ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်သွားအောင် ဖမ်းစားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီပိုမရှိပဲ သွယ်လျကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဘယ်ဖက်ရှင်နဲ့ မဆိုလိုက် ဖက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် မိုးပွင့်ဖြူ ရဲ့ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous post အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပကို ရောက်နေပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတည်း ရှိနေကြောင်း သက်သေပြ လိုက်တဲ့ ယုဇန ရဲ့ဗီဒီယို
Next post အတွင်း သား ပေါ်လွင်အောင် မိမိုက် လွန်းနေ တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ ပုံရိပ်များ